VLC vs Media Player Omuma
VLC na Media Player Omuma bụ abụọ a ma ama media Player na Internet. Ọ bụrụ na ị na-enweghị echiche nke otu onye na-ahọrọ, na ị na-abịa nri ebe. Isiokwu a ga-eji tụnyere abụọ ndị a Player na-enyere gị aka mkpịsị aka pụta nke na otu onye bụ mma.
Okwu Mmalite nke VLC na Media Player Omuma
VLC bụ na-emeghe-isi iyi cross-ikpo okwu multimedia ọkpụkpọ na kpuchie mepụtara site na VideoLAN oru ngo. Ọ na-akwado ọtụtụ ọdịyo na video codecs na faịlụ formats nakwa dị ka DVD, VCDs, na dị iche iche gụgharia ogbugba ndu, nke nwere ike na-akpọ a obere multimedia ọkpụkpọ, encoder, na streamer.
Media Player Omuma bụ obere na fechaa media ọkpụkpọ maka Windows. Ọ na-ese dị ka ezi-ochie Windows Media Player 6.4, ma nke nwere dị iche iche amara atụmatụ. Ka ihe atụ, o nwere wuru na-DVD ọkpụkpọ na ezigbo oge mbugharị, nkwado maka AVI ndepụta okwu, QuickTime na RealVideo nkwado (achọ QT na / ma ọ Real ọkpụkpọ), na nza ọzọ.
Media Player Omuma
Sistem Windows / Linux / Mac OS X / iOS / Android Windows
Ọhụrụ Version 2.0.6 6.4.9.1
Kasị nso-nso Ụbọchị mwepụta Apr 11, 2013 Dec 10, 2008
Original Ụbọchị mwepụta Feb 1, 2000 May 29, 2003
Akwado Formats .wav, .mp3, .mp4, .aac, .wma, .ogg, .ra, .avi, .mov, .xvid, .mpeg, .3gp, .asf Ọkpụkpọ na, .asx, .flv, .m2p na wdg .wma, .mp3, .mp4, .ogg, AAC, .mkv, .xvid, DivX, .avc, .avi, .flv na ect
Site na nke a cart, anyị ga-ahụ VLC dị mma karịa Media Player Omuma mgbe na-abịa atụmatụ na ọrụ.
Alternative ka VLC na Media Player Omuma
Ọ baghị uru ikwu, ma VLC na Media Player ndị dị ike na zuru-apụta media Player, ha enweghị ụfọdụ atụmatụ na ụfọdụ ndị ọzọ media Player enweta. N'ihi na m na, m na-ahọrọ ọzọ mfe na-eji ma dị ike media player- Wondershare Player. Ọ na-e na a ọzọ kensinammuo na onye ọrụ-enyi na enyi interface na-akwado iche iche mgbasa ozi formats. Na ya, ị nwere ike mfe igwu egwu ma na-enwe ọkacha mmasị gị videos na audios enweghị ihe ọ bụla hassle. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-enye ndị ọzọ nkecha atụmatụ. Ka ihe atụ, i nwere ike weghara snapshots na Stitch ha n'ime otu ibe, họrọ mechie kọmputa mgbe playback, doro anya playback akụkọ ihe mere eme, ect. Ugbu a ibudata a mgbasa ozi ọkpụkpọ ma ọ bụ ego ozi ndị ọzọ.
> Resource> VLC> VLC vs Media Player Omuma: Kedu onye dị mma?